Soomaalida Kenya siday uga falceliyeen khilaafka Kenya iyo Soomaaliya? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, DAILY NATION
Labada waddan mid walba wuxuu sheeganayaa inuu leeyahay biyahan oo ku fadhiya dhul lagu qiyaasay 1,000km oo isku wareeg ah
Tan iyo galinkii dambe ee Sabtida, markii ay dowladda Kenya ku dhawaaqday iney Danjiraheeda Soomaaliya u yeertay, kii Soomaaliyana ka direyso Kenya, waxaa baraha xiriirka bulshada si weyn loogu hadal hayay xiriirka xumaaday ee labada waddan.
Dadka ka hadlayay arrintan ayaa isugu jiray siyaasiyiin, mas'uuliyiin, aqoonyahanno wax falanqeeya iyo muwaadiniinta labada dal.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa go'aanka safiir u yeeridda ku dhawaaqday, waxayna barteeda Twitterka soo dhigtay qoraal ku aaddan tallaabadaas.
Dalka Kenya ayaa waxa ku nool Soomaali badan, iyagoo ka mid ah qowmiyadaha kala duwan ee degan.
Qaar ka mid ah Shacabka Soomaalida Kenya ayaa taageero u muujiyey dowlada Soomaaliya, iyagoo u muuqday inay ka soo horjoodan go'aankii ka soo baxay dowladda Kenya.
Badanaa marka ay dhacaan dhacdooyinka noocan oo kale ah waa lagu kala qaybsamaa.
Qaar ka mid ah dhagaystayaasha BBC ee ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sidaan yiri, "Magacayga waa Cismaan Cali, waxaana u dhashay dalka Kenya waxaan dowladda Kenya ku boorin lahaa inay u nuglaato dowladda Soomaaliya maadama ay yihiin laba dal oo daris ah iskuna baahan."
Hodan Jimcaale, oo iyadana ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa tiri, " Kenya waxan dhihi lahaa inaysan Soomaaliya ugu hanjabin waxyaalo aan jirin, oo ay ka tanaasulaan, Soomaaliya iyadaa dhib badan soo martay umana baahna hadda dhibaato dhanka diblomaasiyadda ah."
Xigashada Sawirka, MADAXTOOYADA KENYA
Marka uu qalaase ka dhex taaganyahay labada dal waxay cabsi badan gashaa Soomaalida dagan dalka Kenya, iyagoo mararka qaar ku cawda in loo gaysto xadgudubyo ama baaritaanno aan daruuri ahayn lagu sameeyo.
Kenya ayaa go'aankeeda ugu dambeeyay u sababeysay caro ay sheegtay iney ka qaadday tallaabo ay dowladda Soomaaliya "ku beecineyso shidaal ku jira dhul badeed ay Kenya leedahay".
Muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamayay, waxaana sannadkii 2014-ka ay dowladda Soomaaliya maxkamadda caddaaladda ee adduunka u gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya oo iyadu dooneesay in soohdinta badda ee labada dal la waafajiyo tan barriga.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Tarsan ayaa ka dagay Muqdisho, halka magaalada Nairobi-na uu dib ugu noqday safiirkii Kenya u fadhiyay Soomaaliya Lucas Tumbo.
Afar ku dhimatay qarax ka dhacay Kismaayo
Shiinaha oo digniin u diray markabka dagaalka Britain ee ku soo dhowaaday xadkeeda